Wararka - Farqiga u dhexeeya taageere AC iyo taageere DC
1. Mabda'a shaqada:
Mabda'a shaqada ee marawaxadda qaboojiyaha DC: iyada oo loo marayo korantada DC iyo soo-kicinta elektromagnetic, tamarta korantada waxaa loo beddelaa mashiinno lagu kaxeeyo wareegga daabka. Gariiradda iyo IC si isdaba joog ah ayaa loo beddelaa, iyo giraanta magnet-ka ee 'induction magnetic' ayaa wadata wareegga daabka.
Mabda'a shaqada ee taageere AC: Waxaa wada isha korantada AC, danabkuna wuu is beddeli doonaa inta u dhaxeysa togan iyo taban. Kuma tiirsanaanta kantaroolka wareegga si loo abuuro aag magnet ah. Soo noqnoqodka korantada ayaa go'an, xawaaraha isbeddelka ee tiirarka birlabta ee ay soo saarto xaashiyaha birta ah waxaa lagu go'aamiyaa inta jeer ee korantada la keenayo. Markay sare u kacdo, waxay xawaareysaa xawaaraha wareejinta birlabta, iyo xawaaraha wareegga aragti ahaan. Si kastaba ha noqotee, soo noqnoqoshada waa inaysan noqon mid aad u dhakhso badan, dhaqso badan ayaa u horseedi doonta dhib bilawga.
2. Qaab dhismeedka:
Rotor-ka marawaxadda qaboojiyaha DC waxaa ka mid ah garbaha hawo-qaboojiye ee taageere qaboojiye DC ah, kuwaas oo ah isha laga helo socodka hawada, dhidibka marawaxadaha, waxaana loo isticmaalaa in lagu taageero wareegga garbaha isku dheelitiran, rotor magnetic rotor, magnets joogto ah iyo kor u qaadida heerka magnetic xawaaraha badalka xawaaraha, meegaarka giraanta magnetic, Giraanta magnetic Fixed. Intaa waxaa dheer, waxaa sidoo kale ku jira taageerida ilo. Iyada oo loo marayo qeybahan, qeybta oo dhan iyo qeybta mootada ayaa loo hagaajiyay wareegga qaaxada. Jihada wareegga ayaa la soo saaray, xawaaraha wareegga firfircoon iyo weynna waa mid muhiim ah. Waxqabadkeeda nidaaminta xawaaraha ayaa wanaagsan, xakameyna waa fududahay.
Qaab dhismeedka gudaha ee taageere AC ah (hal waji) wuxuu ka kooban yahay laba hawo wareejin, mid waa bilowga wareejinta, labadan dabeyl ayaa isku xira taxane ahaan midba midka kale, sidaasna ku sameysmaya seddex dhibcood, barta taxanaha ah waa dhamaadka guud, iyo dhamaadka winding dhamaadka waa hawl bilowga dhamaadka dhamaadka winding waa dhamaadka socda. Intaas waxaa sii dheer, awood-bixiye bilow ah ayaa loo baahan yahay. Awoodda badanaa waa inta udhaxeysa 12uf iyo danab iska caabida badanaa waa 250v. Waxaa jira laba isku xirayaal. Mid ka mid ah dhamaadka wuxuu kuxiranyahay dhamaadka wiishka bilowga kan kalena wuxuu kuxiranyahay dhamaadka dabaylaha socda si loo sameeyo saddexagal. Awoodda korantada (looma baahna in la kala saaro khadka tooska ah iyo khadka dhexdhexaadka ah) wuxuu ku xiran yahay dhamaadka hareeraha socodka (taas oo ah, sidoo kale wuxuu ku xiran yahay dhamaadka hal dhinac ee korantada), kan kalena wuxuu ku xiran yahay dhamaadka guud , iyo siligga dhulku wuxuu ku xiran yahay qolofka mootada.
3. Sifooyinka astaamaha:
Waxyaabaha taageere qaboojiyaha DC: Waxay ka samaysan tahay waxyaabo daawaha ka mid ah, oo cimriga nolosha waxaa loo isticmaali karaa si joogto ah in ka badan 50,000 saacadood. Qaab dhismeedka gudaha ee DC wuxuu leeyahay tarjubaan iyo guddiga kontaroolka ugu weyn (oo ay kujiraan wareegga isdabajoogga isdabajooga, shaandhada hagaajiyaha, wareejiye kordhiye, iwm), oo aan saameyn ku yeelan doonin isbeddelada danab. Cimri dheer.
Qaab dhismeedka gudaha ee taageere AC ayaa badiyaa ah transformer. Inta badan qalabka loo isticmaalo taageere AC waxay ka samaysan yihiin cirbado dheecaan ka soo baxa guriga, guud ahaan cirbadaha tungsten ama qalabka birta aan lahayn. Haddii danabku si aad ah u isbeddelo, waxay saameyn ku yeelan doontaa nolosha adeegga tarjumaadda.
Waqtiga boostada: Sep-24-2020
Hvac Fan Puller, 12cm Ac Axial Fan, Taageerada Birta solay 80mm, 172mm Ac Axial Fan, Ilaalada Fan Birta, Ilaalada Fan caaga,